Black TV 4K Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu+IPTV] - Luso Gamer
Black TV 4K Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu+IPTV]
Wagadzirira here kuona iyi yemahara yepamhepo papuratifomu apo vese vakanyoreswa uye vasina kunyoreswa vari kufambisa zvisingaperi zvemukati? Kana hongu saka iwe zviri nani kurodha yazvino vhezheni yeBlack TV 4K. Kubva pano nekudzvanya kumwe chete.
Nyika yeInternet yakapfuma nezvinhu zvevaraidzo. Iko mafeni anogona kuwana uye kunakidzwa nekusingaperi online mapuratifomu emahara pasina kunyoreswa. Zvakadaro, mazhinji emapuratifomu epamhepo emahara anosvikika ane njodzi kuwana uye anogona kukumbira mvumo dzisina basa.
Bvumira izvo zvibvumirano zvinogona kuwedzera kusadzika kwedata uye zvinogona kukonzera kukuvara kwakanyanya kumidziyo. Naizvozvo kutarisa vanhu kufarira uye kukumbira. Pano tinopa iyi itsva online Vadivelu Comedy Movie App yevashandisi veAndroid.
Chii chinonzi Black TV 4K Apk
Black TV 4K Android inzvimbo yekuvaraidza yepamhepo. Izvo zvinobvumira vashandisi kufambisa asingagumi Mafirimu uye Series mahara pasina kunyoreswa kana kunyoreswa. Zvimwe zvipingamupinyi zvakakosha zvinoshanda sekupokana nevaoni.
Iyo huru inopikisa inokonzeresa dambudziko rakakura iri internet kumhanya. Ehe, ruzhinji rwevashandisi venhare vanogona kusangana nedambudziko iri pavanenge vachitepfenyura zvemukati nekuda kwekunonoka kubatana. Kunyangwe pasi rose vanhu vanogona kusangana nedambudziko guru iri nekuda kwekunonoka kubatana.
Naizvozvo tichitarisa rubatsiro rwe fan, ivo vanogadzira vanobatanidza kukurumidza maseva. Iye zvino ese ari maviri mafaera eApp neVhidhiyo anogarwa pamusoro pemasevha anoteerera. Zvinoreva kuti maseva anozopa otomatiki uye anotonga kutenderera zvakanaka.
Kunyangwe isu tisina chokwadi nezvezvisungo zvenguva yemberi. Asi parizvino, vashandisi vanogona kuwana zvevaraidzo nekudzvanya kamwe chete. Kusvika parizvino akawanda akasiyana ma pro maficha akaiswa mukati mekushandisa. Uye pazasi apa tichakurukura izvo zvine tsika.
zita Black TV 4K
zera 40 MB
Package Zita com.black.bla4k
Idzo pro sarudzo dzinosanganisira Multilingual Plugin, Themes, External Parental Control, User Account, Hid Vod Categories, Live Categories, Series Tags uye Inbuilt Parental Control etc. Kunyangwe isu tisingakwanisi kuwana chero dhawunirodha maneja mukati.
Kana iwe uri pakati peavo vari kutsvaga kudhawunirodha mavhidhiyo uye kufambisa iwo ari offline mode. Kutadza kuita izvozvo nekuda kwepolicy yakasimba. Kunyangwe vagadziri vari kuronga kuwedzera imwe sarudzo mukati mefaira rekushandisa.
Asi isu hatina chokwadi nezve data rechokwadi maererano nekuwedzera kwezvinhu. Saka hausi kugadzikana nemutauro wakasarudzika, saka vashandisi vanogona kushandura uye chinja icho kubva pane shanduko yemutauro sarudzo. Kana iwe uri mubereki uye uchigara uchinetseka nezvevana.
Nekuti vanogadzira vanodyara chikamu ichi chakaparadzana chine zita reanime mukati. Iye zvino vana vanotenderwa kutepfenyura zvisingaperi zvipenyu zvehupenyu. Ikozvino uchishandisa kudzora kwevabereki application inogoneka kubva kune ekunze zvishandiso.
Akawanda matema anozopa kutaridzika kutsva uye kuratidza. Vazhinji vashandisi vanogona kuwedzerwa uye kubviswa zvakananga kubva mukati mekushandisa. Saka iwe wakatarisana uye uchitsvaga yakanakisa online yemahara chikuva. Ipapo isu tinokurudzira avo vaise Black TV 4K Dhawunirodha.
Inopa varaidzo isingaperi.
IPTV Zviteshi zvinosanganisirwawo mukati.
Multilingual plugin inowedzerwa.
Custom Setting dashboard iripo.
Kudzora kwevabereki pakutarisira vana.
Maitiro ekurodha Black TV 4K App
Parizvino application yacho yakakamurwa pakati pezvinodzora zvikumbiro. Nekuti iyo application inoonekwa seyakaganhurwa nyika uye chete nyika chaiyo vanokodzera vanobvumirwa kuwana. Saka unovhiringika uye uchitsvaga yakanakisa imwe sosi.
Ipapo isu tinokurudzira avo kuwana webhusaiti yedu uye nyore kurodha yazvino Apk faira. Izvo zvinosvikika kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Ingobaya pamusoro pekurodha bhatani rekubatanidza uye kurodha kwako kunotanga otomatiki.
Isu takatoisa application pamusoro pemidziyo yakasiyana. Uye mushure mekuisa iyo app, isu hatikwanise kuwana chero dambudziko rakakomba. Kunyangwe kuvapo kwechishandiso pamusoro pechitoro chekutamba kunoratidzawo iyi vhoti yekuvimba maererano nekuchengetedza.
Kana iwe usingakwanise kuwana iyo app uye kutsvaga mamwe maapplication akafanana. Ipapo isu tinokurudzira avo vaise vachitevera maApk mafaera mukati memafoni. Izvo zvinosanganisira WatchNow TV Apk uye 9xflix Apk.
Saka iwe unoda kutepfenyura zvevaraidzo zvemukati zvinosanganisira IPTV Zviteshi. Nekudaro, haugone kutenga marezinesi ekutanga uye kutsvaga zvakanakisa online emahara masosi. Wobva waisa Black TV 4K mukati me smartphone uye unakirwe zvisingaverengeki zvemukati.
Categories Entertainment, Apps Tags Black TV 4K, Black TV 4K Apk, Black TV 4K App, Black TV 4K Download, Vadivelu Comedy Movie App Post navigation
WatchNow TV Apk Dhawunirodha YeAndroid [Mafirimu Achangoburwa]